Uwenza njani umbala wegolide kwi-Illustrator: landela la manyathelo alula | Abadali be-Intanethi
Uwenza njani umbala weGolide kwi-Illustrator
UNerea Morcillo | 24/05/2022 16:00 | Idizayini yeMifanekiso, ngokubanzi
Umbala wegolide usoloko uthathwa njengombala wempumelelo. Kuyilo, i-hue esetyenziswa kwii-gradients ezininzi, kwaye ivelele ngaphezu kwayo yonke enye ixabiso layo, kunye ne-hue ephezulu kunye nokukhanya. Kodwa asifuni ukuthetha nawe ngokuchanekileyo ngombala wegolide, kodwa kunoko, ukwenza uluhlu lwemibala.
Ukwenza oku, iteknoloji iye yenza uthotho lweenkqubo kunye nezixhobo eziye zanceda ngendlela ethile ukuba negalelo kuphuhliso lwezi inki CMYK. Ngoko ke, kule post, sifuna ukuthetha nawe malunga nendlela yokwenza uluhlu lwegolide kwi-Illustrator, inkqubo esele isetyenziswe iminyaka ngamawaka kunye namawaka abasebenzisi.
1 Umzobi: iimpawu ezisisiseko kunye nemisebenzi
2 Isifundo: Ukwenza uMbala weGolide kwi-Illustrator
2.1 Inyathelo 1: Seta umbala kwi-CMYK
2.2 Inyathelo lesi-2: Seta umbala wegolide ngokukhazimla
2.3 Inyathelo 3: Funda ezinye iinguqu
3 Iinkqubo zokwenza uluhlu lwemibala
3.2 Ukuthathwa kweAdobe
Umzobi: iimpawu ezisisiseko kunye nemisebenzi
Adobe Illustrator yinkqubo okanye isoftwe eyinxalenye yoluhlu lweenkqubo eziqulathwe nguAdobe. Yinkqubo ye-quintessential yamagcisa, kuba ikuvumela ukuba uzobe kwaye wenze imizobo, nangona izalisekisa neminye imisebenzi emininzi esiza kuyichaza kamva.
I-Illustrator inezixhobo ezisisiseko kunye neziphambili zophuhliso lwendalo emininzi kunye noyilo. Ukuba besiza kuqaqambisa Eyona nto ibalulekileyo nge-Illustrator ngaphandle kwamathandabuzo iibrashi zayo, kuba zezona zixhobo zisetyenziswa rhoqo.
Ifomathi yayo yemveli yaziwa ngokuba hayi. kwaye yifomati ekwalathisa ngqo kwinkqubo ngeprojekthi oyigcinileyo ngolu lwandiso. Yinkqubo oza kusebenza ngayo ngokukhawuleza, kwaye iya kukukhokela ngesandla kunye nokuzimela kuyo yonke i-interface yayo yonke kunye nezinto zayo ezinkulu ezinokwenzeka.
I-Adobe Illustrator ayilunganga nje ukwenza imizobo, kodwa nayo iyakwazi nokwenza ii-vectors. IiVektha zizinto zegraphic ezinokwahlulwa zibe ziimilo ezahlukeneyo kwaye zisebenziseka ngokupheleleyo kwaye zihleleke, yiyo loo nto ikwayinkqubo elungileyo yokudala iilogo kunye neempawu ezithile.
Ayinayo kuphela iibrashi zazo zonke iintlobo, kodwa nayo Inoluhlu olubanzi lweefonti. Ngoko unokuhamba phakathi kweendlela ezahlukeneyo ezikhoyo. Into entle malunga nale nkqubo kukuba ifonti nganye yahlulwe ngokwesitayile sayo, ngoko ke unokukhetha ukusebenzisa ezo ziqulathe kuphela isitayile okanye usapho lokuchwetheza olufunayo.
Le nkqubo sele isetyenziswa iminyaka emininzi kwaye ukuya kuthi ga ngoku Ikwanayo neenguqulelo ezahlukeneyo eziye zahlaziywa zaza zahlaziywa ngokuhamba kwexesha., ukunika inkangeleko kunye nokusebenza esikwaziyo.
Olunye uphawu olubalaseleyo, kukuba yinkqubo ekuvumela ukuba uhlele iifomati zePDF. I-Illustrator ikuvumela ukuba uvule iPDF kwaye uyihlele ngokuthanda kwakho. Yenye yezinto ezisetyenziswa ngabasebenzisi abambalwa kuba bekhetha ukusebenzisa umhleli osemthethweni we-Adobe PDF (umfundi we-Acrobat).
Njengoko sisixhobo esifanelekileyo sokuzoba, uluhlu olubanzi lwemibala ekhoyo lukwagxininiswa. Iqulethe ithuba lokusebenzisa iinkangeleko zemibala eyahlukileyo, ngoko ungakhangela kwi-inks zayo zePantone, ii-inki ezinikezela ngomgangatho omkhulu kushicilelo lwangaphambili.
Isifundo: Ukwenza uMbala weGolide kwi-Illustrator
Umthombo: Igrafu yokwenyani
Kwisifundo esilandelayo, Siza kukubonisa isikhokelo esincinci sokukwazi ukuseka kunye nokwenza umbala wegolide kwiprofayile yombala we-CMTK. Ukufumana umbala ochanekileyo ukusuka ekuqaleni kunzima kakhulu, kodwa ekubeni inkqubo isinika amaxabiso angagqibekanga kumbala ngamnye, siza kuthatha ithuba lo msebenzi omncinci, ukufunda indlela yokuphuhlisa ezinye iintlobo zegolide ezifanayo kunye nemiphumo eyahlukeneyo. kunye neempawu.
Ngale ndlela, uya kuba nakho ukufumana igolide ngeendlela ezahlukeneyo, qaphela kwaye ungaphoswa nantoni na elandelayo.
Inyathelo 1: Seta umbala kwi-CMYK
Ukuseta umbala kwi-CMYK, kufuneka sijonge ikhowudi yayo yereferensi okanye ixabiso.
Kule meko ixabiso lombala wegolide, inxalenye yesiseko sokuba: C: 0% (0.000), M: 23% (0.234), Y: 93% (0.933), K: 6% (0.063). Kodwa ingxaki imiselwe xa inkqubo ingasiniki umbala wegolide kubo bonke ubukhazikhazi bayo, kodwa endaweni yoko isinika i-inki ecaba ngokupheleleyo njengomgangatho.
yintoni dKuya kufuneka senze i-inki ebonakala ngokuqaqamba kwayo kunye neenkcukacha ezincinci ezenza umbala wegolide weklasi njengoko siwazi.
Inyathelo lesi-2: Seta umbala wegolide ngokukhazimla
Into yokuqala esiza kuyithathela ingqalelo phambi kokuba sisebenzise amaxabiso esiza kukubonisa wona, kukwazi ukuba umbala wegolide, osuka kumzobo othe chatha nakwiscreen, awusokuze unike imbonakalo yokwenyani. yombala wegolide esiwubona ngokwasenyameni, oku kungenxa yokuba ezinye iimpawu ezivezwa ngumbala wegolide ngokwenyani azisebenzi ngokupheleleyo kuzo, kuba ngumbala othanda ukuba namandla amaninzi kunye nokuqina, kodwa siza kuzama ukuyenza ibonakale ilungile kangangoko kunokwenzeka.
Ukwenzela oku, siya kuzisekela kula maxabiso alandelayo: CMYK: C:0% M:20% Y:60% K:20%. Nje ukuba sibe namaxabiso, kufuneka sisete uhlobo lwephepha esifuna ukuba i-inki iprinte kulo, umzekelo, asiyi kubona igolide efanayo kwiphepha elinevanishi, apho kuya kuqaqamba kakhulu kwaye kuqikelele ngakumbi, kunokuba kwiphepha eliqhelekileyo okanye le-matte, eliya kuphelisa nayiphi na into ekhanyayo kunye neempawu zegolide zangempela.
Nje ukuba sikhethe uhlobo lwephepha kwaye sele sibonisile amaxabiso, kufuneka siprinte kuphela ukujonga isiphumo.
Inyathelo 3: Funda ezinye iinguqu
Ukwahluka kombala wegolide kuya kukunceda ukuba wazi ngokwenyani iindidi ezahlukeneyo ezikhoyo.
Umzekelo, kuya kuba ngcono ukuba Uya kwenza uhlobo lwetafile kwi-Illustrator, itheyibhile encinci ene-7 okanye i-8 imiqolo okanye iikholamu, ngale ndlela, kuya kufuneka udlale kuphela ngeenguqu ezahlukeneyo, ukuqala ngegolide eqhelekileyo, ude uzame amathoni alula kunye namnyama.
Ngalo lonke ixesha khumbula khuphela kwaye unamathisele kwibhodi nganye ikhowudi ehambelanayo okanye ixabiso lamanani kuxhomekeke kuhlobo lombala okanye ukwahluka okukuko, kuba iya kusebenza njengesikhokelo.
Iinkqubo zokwenza uluhlu lwemibala
Umbala we-Adobe yinkqubo eyinxalenye ye-Adobe kwaye izalisekisa umsebenzi wokukwazi ukufumana nokudala naluphi na uhlobo loluhlu olufunayo. Yinkqubo ebonakaliswe ikakhulu kuba ikuvumela ukuba udale iipalethi zemibala ezintlanu ezahlukeneyo.
Ikwakuvumela ukuba wenze imibala emfanekisweni okanye kumzekeliso, nto leyo entle kuba uya kuba nakho ukufumana ireferensi echanekileyo yombala ngamnye owubona emfanekisweni. Kwaye, yonke ipalethi oyila kwaye uyigcine iya kugcinwa ngokuthe ngqo kwi-Adobe Cloud, ukuze uhlale ubuyela kuyo nanini na ufuna.
Ukuba i-Adobe Color CC ibonakala ngathi yinkqubo emangalisayo kuwe, i-Adobe Capture ayihoyi. Yinkqubo leyo yenza usetyenziso lwasimahla lwezixhobo eziphathwayo. Ngesi sixhobo, uya kuba nokufikelela ekubeni ukwazi ukubamba zonke iintlobo zemibala ngendlela eyiyo nechanekileyo.
Kwakhona, uya kuba nakho ukunyenyisa nganye yeethowuni kunye noluhlu ngalunye lwechromatic olubambileyo, ziya kuvela ngoko nangoko kwiilayibrari ze-Adobe, ngoko ke iipeyilethi zakho kunye nemibala iya kuhlala ikhuselekile kwaye igcinwe kwezinye iifolda zenkqubo.
Iicools yenye inkqubo emangalisayo ongayi kukwazi ukuyiphosa. Sisixhobo se-intanethi esenza imibala kunye neethoni ngoko nangoko kwaye ngokukhawuleza. Kuya kufuneka ucofe kuphela umbala owufunayo kwaye kwangoko inkqubo ngokwayo iya kuvelisa uhlobo lwephalethi ngeminye yemibala.
Yeyona ndlela ilula kwaye ikhawulezayo yokukwazi ukwenza nokuvelisa imibala yalo naluphi na uhlobo. Ukongeza, uya kuba nokufikelela ekubeni ukwazi ukutsala iithoni kwaye uzilungelelanise ukuze zifane nendlela ofuna ukuba zibukeke ngayo. Sisixhobo esigqibeleleyo esingalungelelanisi kuphela imibala, kodwa nakuwe.
Sesinye sezona zixhobo zilula esinokuzifumana kolu luhlu luncinci lokhetho. Ngokungafaniyo nabanye, indlela yokusebenza yale nkqubo yahluke kakhulu kwaye ayinazo izixhobo zininzi, kuba kufuneka ibe nguwe ovelisa umbala ngokucofa.
Iphalethi iya kwenziwa xa usahlule yonke imibala obucinga ukuyijonga, ngoko lusisicelo esibiza kakhulu ngokwemigaqo yokusebenza kwayo kunye nomsebenzi.
Isenokuba sisicelo esigqwesileyo, kuba inoguqulelo lwe-beta. Iqulethe ujongano oluyibonakalisa kakhulu, kuba isebenza njengokutya kwemibala kunye noluhlu lwazo zonke izitayile ezinokwenzeka. Iwebhusayithi ngokwayo ikubonelela ngemibala engama-40 okanye engama-50 esele imiselwe elungele ukuthanda kwakho.
Yinkqubo eya kukukhokela kwaye ikucebise ukuze ufumane umbala wemibala owuthanda kakhulu kwaye ichaza wena kunye noyilo lwakho. Yindlela elungileyo yokusebenza kunye nesicelo esikhululekile, ukuba awukwazi ukulibala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uwenza njani umbala weGolide kwi-Illustrator
Uyenza njani iDenim Texture kwiPhotoshop
iilogo zokuphulula; imigaqo esisiseko kunye nemizekelo